Familie & Partnerschaft - Ausmalbilder Für kider Kostenlos
Sokajy: Fianakaviana & fiaraha-miasa
Ny fitiavana dia mihidy ho mariky ny fitiavana
Nisy fomba fiteny taloha nataon'i Charles Haddon Spurgeon nanao hoe: "Ny fitiavana ihany no mosara manena ny ranomasom-pahoriana." Ary ity fanambarana fohy ity dia milaza betsaka noho ny teny hafa rehetra.
Porofom-pitiavana - hodi-kazo amin'ny hazo na fanidiana fitiavana
Koa satria ny fitiavana ny olona no soa lehibe indrindra eto an-tany, dia tokony hotehirizina sy karakaraina amin'ny fomba tsara indrindra ihany koa izany.
Hidim-baravarana fitiavana - © Papirazzi / Adobe Stock
Mpankafy maro no mampiasa toe-javatra samihafa mba hiaiky ny fitiavany ny sakaizany - hatrany hatrany hatrany ary amin'ny fomba tena samy hafa.
Hatramin'ny andro voalohany amin'ny zanak'olombelona dia nisy fahatsapana fitiavana ihany koa. Ary noho izany, nandritra ny fotoana kelikely, ny fitiavan'ny tena manokana dia naseho ary naverimberina foana - saingy tamin'ny fomba tena samihafa tamin'ny fotoana.
Hatramin'ny am-polony taona lasa izay, ny fo voasokitra tamin'ny hodi-kazo dia mariky ny fitiavana tanteraka. Na eo amin'ny valan-javaboary, na eo an-tokotanin'ny sekoly, na miafina any anaty ala: ny fo voasokitra matetika dia nilaza mihoatra ny teny maro ary noheverina ho mariky ny hatsaram-panahy amam-pitiavana.
Saingy rehefa mandeha ny fotoana, fomba maro hafa no nisokatra hanehoana ny fitiavanao ny olon-tianao - na hibabohana ny fitiavanao amin'ny namanao tsara. Ho fanampin'ny vokatra maro hafa, ny hidim-pitiavana dia tsy maintsy tanteraka ho an'ny olona maro am-pitiavana amin'izao fotoana izao.
Love hidin-trano nandritra ny fotoana maro
"Ny fitiavana dia mihidy ho mariky ny fitiavana" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 18. September 2021 17. September 2021 Sokajy Fianakaviana & fiaraha-miasa, LifestyleKeywords Liebe, tia, Hidy fitiavana, Hidy fitiavana, raiki-pitiaLeave a Comment tia ny hidy ho mariky ny fitiavana
Tsy mora foana ny mahita fanomezana mety ho an'i neny sy ny zaza. Ohatra, raha manome zavatra ho an'ny reny na ny zaza ianao rehefa teraka. Sa izy roa? Natambatray ny hevitra fanomezana 10 tsara indrindra ho an'ny zazalahy kely ho anao.
Ny fanomezana 10 zazalahy tsara indrindra
Rehefa mifidy fanomezana dia matetika mipetraka ny fanontaniana hoe ahoana no tena hitondra fifaliana ho an'ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Na rompera amin'ny vanim-potoana mangatsiaka na pacifier natokana ho azy, ny fikatsahana ny fanomezana tonga lafatra matetika dia mila ezaka be.
Fanomezana tsara ho an'ny reny sy ny zaza - © nuzza11 / Adobe Stock
Rehefa manao izany dia tokony ho raisina ihany koa ny fandaminana ny tontolon'ny fianakaviana mba hialana amin'izany fanomezana izany, ohatra, eo am-piterahana, mivoaka indroa.
Ilaina ihany koa ny mandinika raha ny zaza no lahimatoa na raha efa misy ny zavatra sasany izay efa nampiasain'ny zokiny. Tombony ho azy ny mahita avy amin'ny ray aman-dreny mialoha izay fanomezana mety misy dikany ary mamela ny fanirian'ny ray aman-dreny hiditra ao amin'ny fisafidianana ilay fanomezana.
Matetika dia tsy mora izany ary miteraka olana lehibe amin'ny mpianakavy sy namana maro. Ny zavatra isan'andro sy ny kilalao fanabeazana dia azo ampiharina, satria samy ampiasaina mandritra ny fotoana lava kokoa. Ho fanampin'ny fanomezana mahazatra ho an'ny ankizilahy toy ny fiara kilalao sy ny fiara mitaingina dia misy safidy maro karazana gimikika azo ovaina sy fitaovana voalohany miorina amin'ny miralenta. Mora amin'ny ankizy rehetra ary mifanaraka amin'ny filàny tsirairay avy, misy fanomezana mety ho an'ny tranga rehetra amin'ny taona voalohany amin'ny fiainana.
Ireto ambany ireto ny hevitra fanomezana 10 voalohany ary azo ampiharina amin'ny taona voalohany amin'ny fiainana. "Hevitra fanomezana lehibe ho an'ny reny sy fanomezana ho an'ny zazalahy kely" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 27. Jolay 2021 5. September 2021 Sokajy Fianakaviana & fiaraha-miasaKeywords Baby, teraka, FANOMEZANA, Gifts, Hevitra fanomezana, Hevitra fanomezana, schenkenLeave a Comment ho an'ny fanomezana fanomezana lehibe ho an'i Neny ary manolotra zazalahy kely
Afaka manana fifandraisana sambatra sy maharitra ve ny mpivady manana elanelana lehibe? Toa eny. Na dia nisy aza ny antokon-kintana toy izany taloha, dia saika ara-dalàna izy ireo ankehitriny.
Hatraiza ny haben'ny fahasamihafana eo amin'ny taona?
Raha mijery ny tontolon'ny olo-malaza ianao dia ho hitanao tsara fa mitombo ny fifandraisana amin'ireo mpiara-miasa tanora kokoa na antitra.
Inona no mahavariana ireo mpiara-miasa tanora kokoa na antitra?
Ny fahasamihafana eo amin'ny taona amin'ny fifandraisana - © auremar / Adobe Stock
Fa inona no tena mahasarika an'ireo fifandraisana ireo? Ny tanora dia mety mitady reny na ray hosoloina. Mety hanana anjara toerana lehibe koa ny harena lehibe iray.
Matetika ny olona iray dia mahare momba ny zavatra niainany ratsy izay nanjo ny vehivavy indrindra tamin'ny mpiara-miasa mitovy taona aminy. Ny sasany dia amin'ny heviny mitady ny dikan'ny fiainany, mbola tsy mahalala izay tadiaviny, ary noho izany dia aleony ny mpiara-miasa antitra. "Fiaraha-miasa amin'ny fahasamihafana eo amin'ny taona" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 16. May 2021 5. September 2021 Sokajy Fianakaviana & fiaraha-miasaKeywords fahasamihafana eo amin'ny taona, Partner, Mpiara-miasa, fiaraha-miasaLeave a Comment fiaraha-miasa amin'ny fahasamihafana eo amin'ny taona
Fiaraha-miasa - miaraka mandro
Sarobidy ny fotoana ho an'ny roa - indrindra ho an'ny mpivady manan-janaka. Fa na dia ny olona tsy manan-janaka aza matetika dia kely loatra ny fotoana ilain'ny tsirairay, satria ny fifandraisana lavitra dia ilaina kokoa ary mihabe ny asa. Ny tena zava-dehibe dia ny fandosirana kely amin'ny fiainana andavanandro izay tsy mandany vola firy, fa manampy amin'ny fitazonana ny fifandraisana velona sy mampientam-po. Ny fiaraha-mandro dia afaka mampitombo ny fahasalamana. Miala sasatra amin'ny rano mafana amin'ny fandroana ny vatana, manjavona ny fihenjanana ary manampy anao hahatsapa ny maha-akaiky ny sakaizanao amin'ny fihetsiketsehana kely rehetra ny fihenan'ny fandroana.
Omeo fotoana sy toerana ho an'ny erotika
Fantatra tsara fa ny fiandrasana no fifaliana lehibe indrindra. Ny fandroana ifampizarana dia tokony hankalazana araka ny tokony ho izy ary, miaraka amin'ny fomba tsara, hiomanana miaraka. Raha tsy izany, mazava ho azy fa afaka gaga amin'ny vadinao ianao ary manadala azy ireo amin'ny fandroana bubble.
Amin'ny toe-javatra tsara indrindra dia misafidy andro tsy iasana hiarahana mandro ny mpivady - ary hiantoka fa tsy mandeha maraina ny famantaranandro ny ampitso maraina. Angamba ny ankizy afaka mijanona miaraka amin'ny raiben'izy ireo mandritra ny alina, satria ny ray aman-dreny indrindra matetika tsy afaka miala sasatra tsara sy mankafy ny fotoana iarahan'izy ireo rehefa eo ny zanany.
Saingy satria ny fifanakalozam-pitiavana sy fiainana feno fahafaham-po dia manampy amin'ny fiantohana fa sambatra ny mpianakavy rehetra, ny reny sy ny ray dia tokony hamorona toerana sy handamina fotoana tsy misy ankizy. "Fiaraha-miasa - fiaraha-misakafo" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 12. May 2021 5. September 2021 Sokajy Fianakaviana & fiaraha-miasaKeywords milomano, fandroana, eroticism, fotoana erotika, miaraka mandro, Partner, Mpiara-miasa, fiaraha-miasaLeave a Comment amin'ny fiaraha-miasa - miaraka mandro
Ny olana ara-pananahana dia tena fahita ankehitriny. Betsaka ny isan-jato isan-jato amin'ny fisaraham-panambadiana ankehitriny noho ny 30 taona lasa izay. Noho izany dia tsy tokony hohamaivanin'ny olona ny olana ara-panambadiany ary ezahany fantarina aloha ny antony mahatonga ireo olana ireo ary hanao zavatra momba azy ireo.
Ny antony matetika mahatonga ny olana ara-panambadiana sy ny vahaolana
Iray amin'ireo olana mahazatra indrindra amin'ny fanambadiana ny fialonana. Nanimba fanambadiana maro ny fialonana. Amin'ny fotoana sasany amin'ny fiainana, ny ankamaroan'ny olona dia efa namadihan'ny mpiara-miasa amin'ny fotoana iray.
Ny antony mahazatra indrindra amin'ny olana ara-panambadiana - © NDABCREATIVITY / Adobe Stock
Tsy mamela takaitra ao amin'ny fanahy fotsiny io, fa miteraka tsy fahatokisana ny mpiara-miasa manaraka koa. Amin'ny fivoaran'ny teknolojia, saika ny olona rehetra no azo tratrarina amin'ny fotoana rehetra anio.
Noho io antony io dia azo ampiasaina manokana hanoherana ny fialonana ny teknolojia. Ny antso an-tsary haingana dia matetika ampy hanafoanana ny tsy fifankahazoan-kevitra. Na izany aza, raha tsy eo am-pelatanana izany dia tsara ny mangataka fanampiana amin'ny psikology hahafantarana sy hitondrana ny antony mahatonga ny fialonana be loatra.
Ny tsy fahampian'ny fifandraisana tsy marina na antony iray mahatonga ny olana ara-panambadiana
Ny vehivavy sy ny lehilahy dia mifampiresaka amin'ny fomba samihafa. Raha diso ny fandikana ny fanambaran'ny vadinao ny iray amin'ireo mpivady dia mora ny miady hevitra. Arakaraka ny maha-matetika ny fifamaliana, ny mety hisian'ny tsy fahafaham-po amin'ny fanambadiana. Mba hanoherana an'io fivoarana io dia tokony hiantohana ny karazana ao anaty fanambadiana ny olona. „Partnerschaft & Eheprobleme“ Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 6. March 2021 5. September 2021 Sokajy Fianakaviana & fiaraha-miasaKeywords olana eo amin'ny fifandraisana, Partner, Mpiara-miasa, fiaraha-miasaLeave a Comment zu Partnerschaft & Eheprobleme
pejy 1 pejy 2 pejy 3 Pejy manaraka